သြဂုတ်, 1909 ။
ထှကျသှားယောက်ျား၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် incarnate သည်ဟုဆိုသူမြား၏အရေးဆိုမှုမဆိုမြေပြင်ရှိပါသလား?
အဲဒီမှာအရေးဆိုမှုအချို့မြေဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်တစ်ဖွဲ့လုံးကကြေညာချက်သစ္စာကိုဖျက်သည်။ ဤဝေါဟာရများ appliedto လူသားတွေဖြစ်ကြမဟုတ်လျှင်လူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များသို့ reincarnate ပါဘူး။ သူတို့ကသေတတ်သောလူသား၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆောက်အဦများအတွက်ရေးဆွဲခဲ့ရာမှသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတို့သို့မဟုတ်ဘုံသို့လူသားတစ်ဦးသည်မိမိသေတတ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရေးစပ်ခဲ့သော၏အခြေခံမူပြန်လာ၏အသေခံပြီးနောက်။ အဆိုပါပြောဆိုချက်ကိုလူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတိရစ္ဆာန်များ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌အသက်တာကိုမှပြန်လာစေခြင်းငှါစေခြင်းငှါအရာအပေါ်အများအပြားခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်၏အကြီးအကဲအကြောင်းမရှိအယူသီးမှုနှင့်အစဉ်အလာရှိ၏ ဒါပေမယ့်အစဉ်အလာကိုမကြာခဏစိတ်ပျက်ဖွယ်ပကတိ form မှာနက်ရှိုင်းတဲ့အမှန်တရားထိန်းသိမ်း။ အယူသီးဟောင်းတဦးသိကျွမ်းခြင်းပညာ၏အခြေခံဖြစ်သည့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပုံစံယုံကြည်သောဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာမသိဘဲနေတဲ့အယူသီးမှုရရှိထားသူပေမယ့်အသိပညာကိုမရသောသူတပါးတည်း။ သူတို့ကအပြင်နဲ့ပကတိကြေညာချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားသောအသိပညာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြသောကြောင့်, ခေတ်သစ်ကာလ၌လူ့စိတ်ဝိညာဉ်တိရိစ္ဆာန်များသို့ reincarnate ဘူးသောအစဉ်အလာကိုယုံကြည်သူများသည်ယင်းအယူသီးမှုသို့မဟုတ်အစဉ်အလာမှတွယ်ကပ်။ အလောင်းတွေထဲသို့စိတ်လူ့ဇာတိနှင့်ဝင်စား၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကသင်ပေးလို့ရပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်အရာကိုဘဝသင်ယူရကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒါကိုသိတော့အရာကနေတဆင့်တူရိယာတိရစ္ဆာန်လူ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သေခြင်းမှာတဦးတည်းကလူ့ပုံစံကနေလွန်ကသူ့ဟာသူတက်သည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်လူ့ပုံစံထဲသို့ဝင် reincarnate အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်။ ဒါပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်များ၏မျိုးစိတ်မဆိုထည့်သွင်းမထားဘူး။ ဒါဟာတိရစ္ဆာန်များ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုရိုက်ထည့်မထားဘူး။ အဆိုပါအကြောင်းရင်းတင်းကြပ်စွာတိရိစ္ဆာန်ပုံစံသည်၎င်း၏ပညာရေးဆက်လက်များအတွက်အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်မှသာစိတ်ကိုနှောင့်နှေးလိမ့်မယ်။ တိရစ္ဆာန်သက်ရှိနှင့်ဦးနှောက်တစ်ဦးချင်းစီ၏စိတ်တို့ထိရန်ကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးကြောင့်စိတ်ကိုတစ်ဦးကိုတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်လျှင်တဦးတည်း၏အသကျအမှားတွေကိုတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စိတ် rectified လို့မရပါ။ စိတ်ကိုလူ့တိရိစ္ဆာန်ပုံစံကိုဆက်သွယ်ရန်အဘို့အဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လူ့ဇာတ်ခုံလိုအပ်သောဖြစ်၏ တိရစ္ဆာန်ဦးနှောက်လူ့စိတ်ကိုတဆင့်လုပ်ကိုင်ဖို့အတှကျမထိုက်မတန်တူရိယာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ကိုတိရစ္ဆာန်သို့ reincarnate ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်လျှင်စိတ်ကို, ဒါလူ့ခန်ဓာစဉ်အခါ, တိရိစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးစိတ်ကိုအဖြစ်အလိုလိုသတိလစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမအမှားတညျ့နှင့်အဘို့အသှေားနိုင်အဖြစ်တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စိတ်ထိုသို့သောလူ့ဇာတိမရှိရည်ရွယ်ချက်မှဖြစ်လိမ့်မည်။ အမှားတွေကိုအမှားမတျ, တညျ့နိုင်ပြီးသင်ခန်းစာများကိုသင်ယူနှင့်စိတ်ကိုတစ်ဦးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ထိတွေ့တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်တဲ့ဦးနှောက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်စဉ်အသိပညာသာရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာဘာမှလူသားတစ်ဦးပုံစံမှတဆင့်ပြုမူခဲ့သည့်တစ်ဦးစိတ်ကိုတိရစ္ဆာန်အမျိုးအစားများကိုမဆိုသို့ incarnate သင့်ကြောင်းတစ်ပညတ်တရားအားဖြင့်ပြည့်စုံနိုင်ဆိုပါစို့ထိုကြောင့်မိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် အတွေးအခေါ်က The Word, Vol အပေါ်အယ်ဒီတာ့အာဘော်။ 2, အမှတ် 3, ဒီဇင်ဘာလ, 1905, ကြောင်း: "က Man ထင်နှင့်သဘာဝကိုသူအကြောင်းရင်း၏ unmindful ကြည့်အံ့သြနှင့်အတူပေါ်ကြည့်နေစဉ်အဆက်မပြတ်စီတန်းအတွက်သူ၏အကြံအစည် marshalling အားဖြင့်တုံ့ပြန်။ ။ ။ .Man ထင်နှင့်သူ၏အတွေးအားဖြင့်သဘာဝ fructifies နှင့်သဘာဝသူ၏အကြံအစည်၏သားကဲ့သို့အားလုံးအော်ဂဲနစ်ပုံစံများအတွက်သူမ၏သားမွေးဘွားတတ်၏။ သူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့သဘောသဘာဝချင်းစီ၌သူ၏အထူးသဖြင့်အလိုဆန္ဒများများထဲမှတစ်ဦးပုံဖော်ခြင်းနှင့်အထူးပြုနေစဉ်သစ်ပင်, ပန်းပွင့်သောတိရစ္ဆာန်, တွားသွားသတ္တဝါများ, ငှက်များ, သူတို့ရဲ့ပုံစံများအတွက်သူ၏အကြံအစည်၏ crystal ဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝတရားပေးထားသောအမျိုးအစားအညီမျိုးပွားနိုင်ပြီ, ဒါပေမယ့်ယောက်ျား၏အတွေးအမျိုးအစားကိုသာမိမိအတှေးနှင့်အတူအမျိုးအစားအပြောင်းအလဲများကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ။ ။ တိရိစ္ဆာန်အသေကောင်ဘဝကြုံနေရသည့်အဖွဲ့အစည်းများကသူတို့ဇာတ်ကောင်များနှင့်မိမိတို့စဉ်းစားနိုင်သည်အထိယောက်ျား၏အတွေးကဆုံးဖြတ်ပုံစံရှိရမည်။ ထိုအခါသူတို့ကမရှိတော့သည်သူ၏အကူအညီလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သို့သော်လူသား၏အတွေးယခုမိမိတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သူတို့နည်းတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံများကိုတည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ်။ "သင်ပိုပြီးအပြည့်အဝကိုမည်သို့သကဲ့သို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏ကိစ္စပေါ်မှာလူလုပ်ရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတှေးအကိုရှင်းပြနိုင်သလား ထိုကဲ့သို့သောခြင်္သေ့, ဝံ, ဒေါင်း, အမွီးကခလောကျသံပွုတတျသောမွှေဆိုးအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်များအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်နည်း
ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန်ထိုကဲ့သို့သောနှုတ်ကပတ်တော်အယ်ဒီတာ့အာဘော်တစ်ဦးအဖြစ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားလိုအပ်လိမ့်မယ်။ ဤသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏမှမြှုပ်နှံအာကာသ၌ပြစ်မှားမိလို့မရနိုင်ပါ, ထိုသို့ဤမဂ်ဂဇငျး၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဌာနမှထွက်ခွာရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အထက်တွင်ကိုးကားဖော်ပြထားသောကြောင့်ပြည့်စုံသောအားဖြင့်မူအရဖျောပွဖို့, သို့သော်, ကြိုးစားရလိမ့်မည်။
အားလုံးသတ္တဝါလူသည်သာအဖန်တီးမှုဒြေရှိသူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်များထဲတွင် (မှေးဖှားနိုငျကနေခွဲခြားအဖြစ်။ ) အဆိုပါဖန်တီးမှုဒြေအတွေးနှင့်အလိုတော်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေးစိတ်နှင့်အလိုဆန္ဒ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကိုအလိုဆန္ဒအတွေးအပေါ်ပြုမူသည့်အခါထုတ်ပေးခြင်းနှင့်အတွေးကမ္ဘာ၏ဘဝအမှု၌၎င်း၏ပုံစံကိုယူသည်။ ယခုဘဝကိစ္စ super-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေယာဉ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံယူသောအတှေးတှေး၏လေယာဉ်ပေါ်က super-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထဲမှာတည်ရှိနေ။ ယောက်ျား၏စိတ်ကိုအားဖြင့်အပေါ်ပြုမူတဲ့နတ်မင်းကြီးနိယာမအဖြစ်အလိုဆန္ဒစိတ်ကို၏သဘောသဘာဝနှင့်အလိုဆန္ဒနှင့်အညီအတှေးအထုတ်လုပ်သည်။ ဤရွေ့ကားအတှေးစိတျ၏သဘောသဘာဝနှင့်အလိုဆန္ဒအရသိရသည်။ ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်သည့်အခါဤအတှေးအကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်လာသည့်ပုံစံများအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပုံစံများကိုဤအမျိုးအစားများကိုမိမိတို့အဘို့ပုံစံများကိုဖန်တီးမပေးနိုငျသောအသက်တာ၏အချို့အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်အဆင့်များကကာတွန်းနေကြသည်။
ထိုသူကအတွင်းကမ္ဘာပေါ်မှာတိရစ္ဆာန်၏သဘောသဘာဝရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်မျိုးစိတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အလိုဆန္ဒကိုကိုယ်စားပြုတယ်နှင့်လူ့သတ္တဝါတှငျတှေ့ရနျဖွစျသညျ။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်ဇာတိပကတိလူ၌ရှိကြ၏သော်လည်းသို့သော်သူသည်အကြောင်း, မိမိအအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်, လူ့ဖြစ်ပြီး, သူ့ကိုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုသူကိလေသာခွင့်ပြုခြင်းနှင့်သိမ်းယူခြင်းများနှင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်မိမိတို့၏သဘာဝကိုထင်ရှားစွာပြလိုသာကဲ့သို့သောအချိန်များတွင်မြင်ကြသည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်ဖန်ဆင်းခြင်းအတူတကွရေးဆွဲနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတက်အနာနှင့်သူအားလုံးတိရိစ္ဆာန်ဖန်ဆင်းခြင်း၏စုပေါငျးတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါသည်ခဲ့ပြီးသောဤမျှလောက်များစွာသော strands ဖြင့်ပြီးကြ၏သော်လည်းသကဲ့သို့ဖွစျသညျ။ သူကစိတ်အားထက်သန်တဲ့ paroxysm နေဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းနှင့်ထို့နောက်ကြီးစိုးတိရိစ္ဆာန်၏သဘောသဘာဝကိုရှင်းလင်းစွာကိုယ်တော်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်သည့်အခါလူ၏မျက်နှာကို Watch ။ တောခွေးသည်မိမိမျက်နှာကိုထဲကကြည့်နှင့်သူ့ထုံးစံ၌တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ သူ့ကိုမှတဆင့်ကျားဘောင်းဘီသူသည်မိမိအဘို့စားစရာအကောင်ကိုအပေါ်အဆောတလျင်လိုလျှင်အဖြစ်။ မြွေကသူ့မိန့်ခွန်းကတဆင့် hisses နှင့်သူ၏မျက်လုံးများမှတဆင့်ဝါဝါ။ အမျက်ဒေါသသို့မဟုတ်တပ်မက်သောစိတ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဆင့်အလုပ်လုပ်တယ်အဖြစ်ခြင်္သေ့ဟောက်။ ဒါကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်သန်းအဖြစ်ဤအရာတစုံတယောက်သောသူသည်အခြားဖို့ရာအရပျပေးတျောမူ၏, သူ၏မျက်နှာဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုပင်အမျိုးအစားထဲမှာပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကဖို့ပုံစံကိုပေးစေခြင်းငှါအောက်ပိုင်းအကြားအမြင်ကမ္ဘာသို့ရေးဆွဲနေသည်တိုင်အောင်သူကျား, ဝံပုလွေ, ဒါမှမဟုတ် Fox ၏အတွေးဖန်တီးသောကျားသို့မဟုတ်ဝံပုလွေသို့မဟုတ် Fox ၏သဘောသဘာဝထင်သည်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပြီး, ဘဝကမ်ဘာပျေါတှငျအတှေးဘဝတွေကို ပှားမှတဆင့်ဖြစ်တည်မှုသို့ကွှလာအဖွဲ့အစည်းများ။ ဤမတူညီသောတိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားအားလုံးပုံစံဖြတ်သန်းနှင့်ရုပ်ပုံများကိုမျက်နှာပြင်နောက်ကွယ်မှပြောင်းရွှေ့အဖြစ်လူသား၏မျက်နှာများတွင်စကားရပ်ပေးအပ်ထားတယ်။ တောခွေးမြွေကဲ့သို့ကျားသို့မဟုတ်ဤများ၏ဖြစ်စေတူသောရှိ fox သို့မဟုတ်ရှိ fox တူရန်အဘို့အသို့ရာတွင်ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်က၎င်း၏သဘာဝအရသိရသည်ပြုမူခြင်းနှင့်ကိုယ်နှိုက်ကထက်တိရစ္ဆာန်ကိုအခြားမျိုးများကဲ့သို့ပြုမူဘူး။ အဆိုပါ quotation အတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ဤအကြောင်းကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်, အကြာတွင်ပြသပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောတစ်ခုချင်းစီတိရိစ္ဆာန်တစ်အထူးပြု, လူကိုအလိုဆန္ဒ၏တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အတွေးကမ္ဘာပေါ်မှာပုံစံအားလုံးကို၏ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီး, လူကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခငျ, ဖန်တီးသူ, လူအားနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ကဆိုပါတယ်ကြောင့်သူဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာစပ်လျဉ်းဆိုလိုတာပါ။ သို့ရာတွင်လူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ်ဘာပျေါတှငျတိရိစ္ဆာန်များ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအတွက်အခြားသောလမ်းလည်းမရှိ။ ဤသည်ကိုလည်း၏များစွာသောအဓိပ္ပါယ်များတဦးကိုရှင်းပြလူ reincarnate သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များ၏အလောင်းများကိုသို့ transmigrate စေခြင်းငှါရှေးကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. အတွက်ကြေညာချက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည်: ဘဝစဉ်အတွင်းလူကိုဆန္ဒမပါအတိအကျပုံစံရှိပြီးသောထူးထူးအပြားပြားတိရိစ္ဆာန်နိယာမဖြစ်ပါသည်။ လူသား၏ဘဝစဉ်အတွင်းသူ့ကိုအတွက်အလိုဆန္ဒအစဉ်အဆက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်နှင့်တိရစ္ဆာန်၏အဘယ်သူမျှမအဓိပ္ပါယ် type ကိုသက်သေအထောက်အထားသခင်နှင့်အတူအလွန်ရှည်လျားနေဆဲဖြစ်သည်။ တောခွေးစရှိ fox, ဝံသဖြင့်ရှိ fox, ဆိတ်ခြင်းအားဖြင့်ဝက်ဝံ, သိုးများကဆိတ်နဲ့လိုက်, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်အမိန့်၌၎င်း, ဘယ်မှာယောက်ျားသည်တစ်ဦးသိသာသဘောထားကိုရှိမဟုတ်လျှင်ယခုဘဝမှတဆင့်များသောအားဖြင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် များစွာသောတိရစ္ဆာန်များ၏တဦးတည်းကသူ့သဘောသဘာအတွက်အခြားသူများကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်သူတစ်ဦးသိုးသို့မဟုတ် fox သို့မဟုတ်ဝံပုလွေသို့မဟုတ်အပေါင်းတို့သည်သူ၏အသက်တာကိုသည်းခံကြ၏။ သို့သော်မည်သည့်အမှု၌, သေခြင်းမှာ, သူ့သဘာဝတရား၏ပြောင်းလဲနေတဲ့အလိုဆန္ဒနေဆဲအချိန်လူ့ astral ပုံစံရှိစေခြင်းငှါအရာတစျခုနှင့်တိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားသို့ fixed ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကိုက၎င်း၏တိရိစ္ဆာန်ထံမှထွက်သွားကြတဲ့အခါ, တိရိစ္ဆာန်တဖြည်းဖြည်းလူ့များ၏ထိန်းချုပ်အော looses နှင့်၎င်း၏စစ်မှန်သောတိရိစ္ဆာန်အမျိုးအစားပေါ်ကြာပါသည်။ ဒါကတိရိစ္ဆာန်ပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်မရှိဆိုငျရာအစအနရှိရှိနဲ့သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။